आर्टिचोकस र च्याउको साथ मसूर - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
आर्टिचोकस र च्याउको साथ दाल
तरकारीहरू50 मिनेट4 व्यक्ति325२ क्यालोरी
आर्टिचोकस र च्याउको साथ यी मसूरको फाइदा लिनको लागि एक भाँडा हो मौसमी अवयवहरू र एकै साथ चम्चा पकवानहरूको मजा लिनुहोस् जसले हामीलाई धेरै सान्त्वना दिन्छ।
यस पटक हामीले आर्टिचोकसको साथ हाम्रो विधिलाई समृद्ध बनायौं। एक तरकारी धेरै स्वस्थ र धेरै मूत्रवर्धक गुणहरू संग कि बाट तयार गर्न सकिन्छ धेरै फरक तरीका र त्यो राम्रो चलिरहेको छ असंख्य अवयवहरूको साथ।
तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ कि चिसो महीनामा सबै भन्दा राम्रो मा। त्यसोभए नोभेम्बरदेखि मार्च सम्म हामी स्वादिष्ट र विविध व्यंजनहरू तयार पार्ने अवसर लिन सक्दछौं।
1 आर्टिचोकस र च्याउको साथ दाल
2 के तपाईं आटिचोक र च्याउको साथ यी मसूरको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
केहि बिभिन्न दालहरू ताकि भान्साकोठा तपाईंमा बोरिन नपरोस्।
खाना पकाउने समय: 50M
कुल समय: 50M
१०० जी लीक
हरी मिर्च को g० g
१ लसुनको लंगो
खैरो दालको २ g० ग्राम
मौसमी च्याउको १०० ग्राम
२०० ग्राम zucchini
G 150० आलु
G 20 ग्राम जैतुनको तेल
सब्जी घनको 1 चम्चा (नुस्खा हेर्नुहोस्)
हामी प्याज, लीक, हरियो मिर्च र लसुनको लौंग सफा र छीलो गर्दछौं। हामी यसलाई ठूलो काट्छौं र यसलाई शीशामा राख्छौं। हामी दौरान काट्छौं Seconds० सेकेन्ड, गति 3। हामी टुक्राहरू ब्लेड तर्फ कम गर्छौं।
हामी तेल र poach को समयमा Minutes मिनेट, १००º, गति १।
त्यसपछि हामी दाल, पानी र तरकारी ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। हामी मौसम र हामी कार्यक्रम Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
हामी आलु, जुचीनी, आर्टिचोकस र च्याउको बीचको टुक्रामा काट्ने, धुने र काट्ने अवसर लिन्छौं।
समय पछि, हामी तिनीहरूलाई गिलासमा थप्दछौं। नुन र मरिच समायोजित गर्नुहोस् र पकाउन जारी राख्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º, चम्चा गति, बाँया पालो।
हामी कचौरा वा गहिरो प्लेटहरूमा वितरण गर्छौं भन्ने सुनिश्चित गर्दै कि प्रत्येक प्लेटले सबै प्रकारका तरकारीहरू र मशरूमहरू बोक्दछ। थोरै काटिएको अजमोद छर्कनुहोस्।
के तपाईं आटिचोक र च्याउको साथ यी मसूरको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
Pardin दाल भिज्न आवश्यक छैन किनभने तिनीहरू धेरै चाँडो पकाउँदछन्। तर, यदि तपाईं भान्साकोठामा समय बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, तिनीहरूलाई पानीले कभर गरिएको २ घण्टा भिजाउन दिनुहोस् र तपाईंसँग यो नुस्खा about० मिनेटमा तयार हुनेछ।
तपाईं यी दाल अलिकता थपेर समृद्ध गर्न सक्नुहुन्छ हल्दी र मिठो प्याप्रिका पनि।
तपाईं पनि थप्न सक्नुहुन्छ सुगन्धित जडिबुटी तेज पात वा अजमोद जस्तै। व्यक्तिगत रूपमा, म लौरेल स्वाद धेरै मनपर्दैन तर म स्वीकार गर्दछु कि यसले व्यञ्जनहरूमा धेरै व्यक्तित्व प्रदान गर्दछ।
सफा गर्नुहोस् आर्टिचोकस सबै बाहिरी पानाहरू हटाउँदै। ती कडा छन् र केन्द्रीय घाँस हटाउन को लागी भुल्नुहोस् ताकि ती दाल मा उनलाई सामेल गर्न को लागी सही छ।
को patatas तिनीहरूलाई क्लिक गर्नु उत्तम हुन्छ ताकि तिनीहरूले केहि स्टार्च छोडिदिए र मद्दतलाई गाढा बनाउन मद्दत गरे। निश्चित गर्नुहोस् कि यस टुक्राहरू ठुलो छन् किनकि यदि तपाई तिनीहरूलाई सानो बनाउनुहुन्छ भने ती टुक्रिनेछन्।
यदि श्रोभ एकदम तरल छ र दाल पहिल्यै पकाइएको छ भने, तिनीहरूलाई पकाउन नखोज्नुहोस् किनभने तिनीहरू प्युरी हुनेछन्। तपाईंले श्रोमको साथ केही चम्मच दाल पीस गर्नुपर्नेछ र तपाईं तुरुन्तै पाउनुहुनेछ बाक्लो र स्वादिष्ट ब्रोथ.
तपाईंलाई त्यो पहिले नै थाहा छ फलफूलहरूको खाना पकाउने समय यो उनीहरूको उमेरमा भर पर्दछ। त्यसो भए तपाई यसलाई अधिक मिनेट पकाएर थप्न सक्नुहुन्छ।
यो नुस्खा तपाईं सक्नुहुन्छ अग्रिम गर र केही दिन फ्रिजमा राख्नुहोस्। धेरै स्थिर भएकोमा स्वीकार्दछ कुनै समस्या बिना।
र समाप्त गर्न, तपाईंलाई भन्नुहोस् कि यस विधिमा कुनै मासु समावेश छैन त्यसैले यो # मीटलेस सोमबारको लागि आदर्श हो वा यदि तपाईं शाकाहारी वा शाकाहारी आहारमा हुनुहुन्छ। यो सेलिआक्स, ल्याक्टोज वा अण्डो असहिष्णुका लागि पनि उपयुक्त छ। अर्को शब्दमा, सम्पूर्ण परिवारको लागि उपयुक्त।
थप जानकारी -आर्टिचोक पेस्टो / आलु र हेमको साथ आर्टिचोकस / घरेलु तरकारी ध्यान केन्द्रित पाउडर
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: स्वस्थकर खाना, तरकारीहरू, साप्ताहिक मेनू, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » साप्ताहिक मेनू » आर्टिचोकस र च्याउको साथ दाल
इसाबेल मोरेनो एराउज भन्यो
तपाईं आर्टिचोकसको साथ मसूरको दालको विधिमा संकेत गर्नुहुन्न जुन टर्मोमिक्सले बराबर पत्ता लगाउनको लागि बनाउँदछ। अग्रिम धन्यवाद। यो मलाई एक शानदार नुस्खा देखिन्छ
ISABEL MORENO ARAUZ लाई जवाफ दिनुहोस्
नुस्खा TM5 मोडेलको साथ बनाईएको हो।
थर्मोमिक्समा हरियो बीन सलाद